Wararkii ugu Danbeeyey Doorashada adag ee ka socota Dalka Mareykanka | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Wararkii ugu Danbeeyey Doorashada adag ee ka socota Dalka Mareykanka
Maalin maalmaha ka mid ah doorashooyinka Mareykanka: Waxaad u baahan tahay inaad ogaato
Maalinta ugu dambeysa ee ololaha, Donald Trump iyo Joe Biden waxay raadinayaan codadka daqiiqadaha ugu dambeeya gobolada muhiimka ah ee lagu dagaalamayo.
Trump iyo Biden ayaa maalintoodii ololaha ugu dambeysay ku qaadanaya raadinta codadka gobolada muhiimka ah ee lagu dagaalamayo [
Edgard Garrido / Reuters]
Berri waa maalinta doorashada Mareykanka waxaana Donald Trump, Joe Biden, asxaabtooda tartamaya iyo xaasaskooda ay ku qaadan doonaan maalinta ugu dambeysa ololaha madaxtinimada gobolada muhiimka ah ee lagu dagaalamayo iyagoo raadinaya codadka daqiiqada ugu dambeysa.
In kabadan 94 milyan oo Mareykan ah ayaa horey ugu codeeyay boostada ama shaqsi ahaan codbixinta hore, taas oo ka dhigan boqolkiiba 68.4 wadarta guud ee codbixinta 2016.
Trump wuxuu leeyahay wadiiqo cidhiidhi ah oo guusha Guusha Kulliyadda
Biden wuxuu xirayaa farqiga hore ee Trump-culus Ohio
Pennsylvania waxay muhiim u tahay guusha labada Trump iyo Biden
Trump, Biden ayaa bartilmaameedsanaya dadka North Carolina ee isbedelaya
Halka ay maanta musharixiintu joogaan
Trump wuxuu qaban doonaa shan isku soo bax afar gobol: North Carolina, Pennsylvania, Michigan iyo Wisconsin. Biden waxay leedahay afar dhacdo oo ku baahsan Pennsylvania iyo Ohio. Madaxweyne kuxigeenka Mike Pence iyo kuxigeenka Biden ee Kamala Harris ayaa iyaguna maalintaas ku qaadan doona Pennsylvania. Marwada koowaad Melania Trump ayaa ka ololeyn doonta North Carolina halka Biden xaaskiisa Jill ay joogto Pennsylvania. Madaxweynihii hore Barack Obama ayaa sidoo kale maanta u duuli doona Biden magaalooyinka Georgia iyo Florida.
Haddii jadwalka ololuhu uusan ka dhigin wax iska cad, Pennsylvania waxay u qaabeysay inay noqoto Ground Zero labada olole. Mid walbaa wuxuu rumeysan yahay inay fursad u leeyihiin inay ku guuleystaan ​​20-ka cod ee doorashada ee gobolka, oo uu Trump ku guuleystay tartan aad u adag oo dhacay 2016.
Haddii Trump uusan soo celin karin sanadkaas, waxay si weyn u ciriirinaysaa jidkiisa guusha, gaar ahaan haddii uu sidoo kale lumiyo labada gobol ee kale ee Midwest ee uu ku guuleystay wax ka yar hal dhibic: Michigan iyo Wisconsin.
Codbixinnadii ugu dambeeyay ee ka dhacay Pennsylvania waxay muujinayeen Biden inuu hoggaamiye khafiif ah ka sarreeyo Trump, laakiin sidoo kale waxay soo jeedinayaan in la adkeeyo loolanka maalmaha ugu dambeeya.
Codbixin laga sameeyay Jaamacadda Monmouth oo la soo saaray subaxnimadii maanta ayaa Biden ku hogaaminaya shan ilaa toddobo dhibcood oo ka sarreeya Trump, iyadoo kuxiran dhacdooyinka dadka u soo baxay. Xaalada xaalad-soo-bixid sare, Biden wuxuu ku hogaaminayaa toddobo, laakiin wuxuu leeyahay shan-dhibcood oo hoggaamineed marka loo eego aragtida dadka ka qayb-galaya doorashada. Codbixinta Monmouth bishii la soo dhaafay waxay Biden ka heshay 11 dhibcood iyo siddeed dhibcood mid kasta oo ka mid ah xaaladahaas. Khasaaraha dhanka codbixinta ayaa ah +/- 4.4 boqolkiiba.
Saddex codbixin oo kale oo Pennsylvania ah oo la sii daayay Axaddii ayaa Biden u dhexeeya inta u dhexeysa lix iyo toddobo dhibcood oo leh dhibco khaldan oo ah 4.3 boqolkiiba ama ka hooseeya.
Meelaha kale ee lagu dagaalamayo, soo saarista codbixinno cusub oo la sii daayay dhammaadka wiigga, Biden iyo Trump waxay ku xiran yihiin tirakoobka Arizona, Florida, Georgia, Iowa, North Carolina, iyo Ohio, sida laga soo xigtay celceliska celceliska codbixinta RealClearPolitics. Dhanka kale, Biden wuxuu hayaa celcelis ahaan hogaaminta 5.1 boqolkiiba Michigan iyo 6.6 boqolkiiba Wisconsin.
Haddii ay dhacdo inaad seegtay
Ayaa soo bixi doona ?: Iyadoo 94 milyan oo cod horey loo dhiibtay, yaa loo daayay inuu codeeyo berri? William Roberts oo ka tirsan Al Jazeera ayaa sheegay in iyada oo la adeegsanayo xog weyn iyo microtargeting, labada olole ee Biden iyo Trump ay garanayaan cidda ay weli u baahan yihiin si ay ugu soo baxaan codbixinta.
Haweenka u codeeya: Haweenka waxay u codeeyeen heerar ka sareeya ragga marka la eego doorasho kasta oo madaxweynenimo ilaa 1980, taas oo ka dhigaysa awood awood leh, ayuu qoray wargayska Al Jazeera’s Laurin-Whitney Gottbrath.
Guushii ugu yareyd ee Trump: Waxaan dib u milicsaneynaa sida ugu dhow ee doorashadii madaxtinimada ee Trump ee 2016 runti ay ahayd: afar ka mid ah gobolada uu Trump ku guuleystey waxaa ku guuleystey in ka yar 1.2 boqolkiiba dhibcaha.
Magangalyo-doonka: Magangalyo-doonka Bartamaha iyo Koofurta Ameerika ee ku xayiran xadka Mareykanka ayaa daawanaya natiijada berri rajo iyo cabsi, maadaama aakhiradooda ay ku xiran tahay hadba musharraxa madaxweyne ee guuleysta, sida uu warinayo Megan Janetsky oo ka tirsan Al Jazeera.
Soomaaliya oo si dhow u daawaneysa: Hamza Mohamed oo ka tirsan Al Jazeera ayaa qoray in in badan oo ka mid ah Soomaaliya ay il gaar ah ku hayaan doorashada Mareykanka maaddaama dalkooda laga dareemay saameynta Mareykanka ee loogu yeero “la dagaallanka argagixisada” iyo mamnuucidda Trump ee Muslimiinta.
Previous articleMadasha Xisbiyada Qaran oo kasoo horjeesatay qaabka loo soo xulayo xildhibaanada gobollada Waqooyi
Next articleKu dhawaad boqol qof” oo lagu dilay gobolka Oromada Itoobiya
Madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbland oo ka biyadiidan Gudiyada doorashada ay magacawday...
Nairobi ayaa kulamo ay yeesheen isku raacay in go’aan mideesan ka qaataan magacaabista guddiyada doorashada ku matalayo iyo waxa ay ka yeelayaan guddiyada la...